ဘန်ကောက်မြို့ HGH ဆေးဝါးငွေသားပေးချေမှုကိုလက်ခံ
HGH ထိုင်းနိုင်ငံက နိုဝင်ဘာလ 29, 2017
ဖြန့်ဝေ (link ကို) အကြောင်းကိုပိုမို Read
အဘယ်သို့ငါ HGH ဆေးဆိုင်အကောင့်ပိုက်ဆံထပ်ထည့်သလဲ?
ငွေသားအတွက်အကောင့်ဖွင့်ထိပ်,2နည်းလမ်းတွေရှိပါတယ်ရဲ့အသီးအသီးအကြောင်းပြောဆိုကြကုန်အံ့။
1) ATM စက်များမှတစ်ဆင့်ထိပ်တန်းကိုတက် Account
တစ်ခုချင်းစီကိုစျေးဝယ်စင်တာတစ်ခုသို့မဟုတ်အဓိကထိုင်းစတိုးဆိုင်များတွင် 2), သငျသညျ ATM စက်များရှာတှေ့နိုငျ
ဒီလိုလုပ်ဖို့, ATM စက်တွင်စစ်ဆင်ရေးကို select
15 မိနစ်ထက်မပိုယူရုံအတှကျအသေးစိတျကိုရေးသို့မဟုတ် print ထုတ်
ပိုမိုလွယ်ကူ, ငွေပေးချေမှုမိုဘိုင်းဘဏ်လုပ်ငန်း application ကို အသုံးပြု. သို့မဟုတ် လုပ်. ရနိုင်
နောက်ကျောကထိုင်းနိုင်ငံအတွက် HGH ရရှိရန်မည်သို့နည်း သင်္ဘော & ငွေပေးချေမှုမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ